Sawirro: Waddooyinka Galkacyo oo la isku furay laba sano kadib - Ceelhuur Online
Home > Uncategorized > Sawirro: Waddooyinka Galkacyo oo la isku furay laba sano kadib
December 16, 2017 admin362
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf iyo Taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed C/weli Jaamac Gorod ayaa maanta ku guuleysteen iney dib u furaan waddooyin muhiim ah oo muddo laba sano ah xirnaa magaalada Gaalkacyo.
Mas’uuliyiin kale oo ka socotay Puntland, Galmudug iyo saraakiil ciidan ayaa qeyb ka ahaa qorshaha maanta lagu furay waddooyinkaan. Waxaa la qaaday dhammaan dhagaxyadii lagu jaray waddooyinkaan, waxaana la isku raacay in shacabka ay si nabad ah ku isticmaalaan.
Madaxweyne Xaaf ayaa Gaalkacyo ka waday maalmahan olole ballaaran oo lagu soo celinayo nabadda Gaalkacyo, laguna furayo waddooyinkan. Waddooyinka maanta la furay waxay muhiim u yihiin isku socodka dadweynaha, iyadoo sidoo kale la filayo in la dhameeyo wax walbo oo horey loogu dagaallamay.
Faa Faahin:Diyaaradaha Mareykanka oo Duqeeyay Saldhigyo Al-Shabaab
January 13, 2018 Cali Yare
Jubbaland & DFS oo siyaabo kala duwan uga hadlay xariga Wasiir Janan